Mmachibido Vape na United States na Ahịa factorywa ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | NTOKWU
Omume ndị mmadụ na-enwe banyere vap na iji nicotine eme ihe n'ozuzu dịgasị iche iche. Na United Kingdom, ụlọ ọrụ ahụike gọọmentị na-agba ume iku ume. Ebe ọ bụ na ise siga na-eme ka UK National Health Service na-eweta ibu dị oke ọnụ, mba ahụ na-echekwa ego ma ọ bụrụ na ndị na-ese anwụrụ ọkụ na-a toụ sịga.
Ọtụtụ mba ndị ọzọ na-ekwekwa ka ahịa vapu achịkwa, mana ha anaghị enwe ịnụ ọkụ n'obi na nkwado ha nke omume ahụ. Na United States, FDA nwere ikike maka ngwaahịa alụlụ, mana ọ nọrọ afọ asatọ gara aga na-agba mbọ ịmepụta usoro njikwa ọrụ. Canada agbasoro usoro UK, mana dịka ọ dị na America, mpaghara ya nweere onwe ha ịme iwu nke ha nke na-emegide ihe mgbaru ọsọ nke gọọmentị etiti oge ụfọdụ.
Enwere mba karịrị 40 nke nwere ụdị mmachi na vaping - ma ojiji, ire ahịa ma ọ bụ mbubata, ma ọ bụ ngwakọta. Fọdụ nwere mmachi zuru oke nke na-eme ka vapị bụrụ ihe megidere iwu, gụnyere mmachibido ịre ahịa na ịnwe ihe onwunwe. A machibidoro iwu iwu na Asia, Middle East, na South America, ọ bụ ezie na njedebe kachasị mma nicotine bụ nke Australia. Mba ụfọdụ na-agbagwoju anya. Dịka ọmụmaatụ, ịkwado vapu na Japan bụ iwu ma na-ere ngwaahịa, belụsọ e-liquid with nicotine, nke bụ iwu na-akwadoghị. Ma ngwaahịa anwụrụ ọkụ anaghị ekpo ọkụ dịka IQOS bụ iwu zuru oke ma jiri ya mee ihe.
O siri ike soro mgbanwe niile na iwu vaping. Ihe anyị nwara ebe a bụ rundown na mba ndị nwere mmachi ma ọ bụ mmachi siri ike na vaping ma ọ bụ ngwaahịa vepo. Enwere nkọwa dị nkenke. Nke a apụtaghị dịka ntuziaka njem ma ọ bụ ndụmọdụ maka ịpụ na ikuku. Ọ bụrụ n’ị na-eleta obodo ị na-amabeghị, ị kwesịrị ịlele isi mmalite na nke a pụrụ ịdabere na ya dịka ụlọ ọrụ nnọchite anya obodo gị, ma ọ bụ ụlọ ọrụ njem nke mba ị na-eleta.
Gịnị kpatara mba ji machibido vaping?
Healthtù Ahụ Ike Worldwa (WHO) na ụtaba na-achịkwa ogwe aka Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) - nkwekọrịta zuru ụwa ọnụ nke ihe karịrị mba 180 bịanyere aka na ya - agbaala mmachi na mmachi na sịga sịga kemgbe ngwaahịa mbụ malitere ịbịaru na Europe na Osimiri US na 2007. WHO bụ mmetụta dị ike (na mgbe ọ kachasị ike) na usoro ahụike na ị smokingụ sịga n'ọtụtụ mba - ọkachasị na mba ndị dara ogbenye, ebe WHO na-enye mmemme mmemme na-ewe ọtụtụ ndị ọkachamara ahụike ọha na eze.
Ndị FCTC n'onwe ya na-eduzi ndị ndụmọdụ sitere na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ịse anwụrụ na nzuzo nke America dịka Mgbasa Ozi maka formụaka Na-enweghị Sịga-ọ bụ ezie na US esoghị na nkwekọrịta ahụ. N'ihi na otu ndị a alụ ọgụ ezé na ntu megide vaping na ngwaahịa ndị ọzọ na-emebi ụtaba, ndị FCTC ewerela ọnọdụ ha, na-ebute nsonaazụ maka ndị na-ese anwụrụ ọkụ n'ọtụtụ mba. FCTC gwara ndị òtù ya (ọtụtụ mba) ka ha machibido ma ọ bụ mezie sịga sịga, n'agbanyeghị akwụkwọ nkwekọrịta nke nkwekọrịta nke na-edepụta mbelata nsogbu dị ka atụmatụ dị mma maka ịchịkwa ụtaba.
Imirikiti mba na-adabere n'ịzụ ụtaba, na ọkachasị ire siga, maka ụtụ isi. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị ọrụ gọọmentị na-akwụwa aka ọtọ banyere nhọrọ ha machibidoro ma ọ bụ machibido ngwaahịa mkpokọ iji chekwaa ụtaba. Ọtụtụ mgbe gọọmentị na-ahọrọ itinye vap na usoro ụtaba ha, nke na-eme ka ọ dị mfe ịmanye ndị na-azụ ahịa ụtụ isi. Dị ka ihe atụ, mgbe Indonesia tinyere ụtụ isi pasent 57 banyere siga e-ese, otu onye ọrụ minista na-ahụ maka ego kọwara na nzube nke ụtụ ahụ bụ “igbochi ihe oriri.”
Enweghi ikikere ọha na eze n'ọtụtụ mba ka ị smokingụ sịga, dị ka United States. Ọ bụrụ na ị na-eche ma ọ bụrụ na ị nwere ike vape n'ihu ọha, i nwere ike na-emekarị hụrụ ọzọ vaper ma ọ bụ na-ese anwụrụ ma na-ajụ (ma ọ bụ ogbugbu) ihe iwu bụ. Mgbe enwere obi abụọ, emela ya. Ebe ịghapu iwu bụ ihe megidere iwu, ị ga-ejiderịrị ike na a gaghị etinye iwu na ya tupu ị malite ịfụfụ.
Ebee ka amachibidoro ma ọ bụ machibido ngwaahịa vepo?
Ndepụta anyị sara mbara, mana enwere ike ọ gaghị ahụ. Iwu na-agbanwe oge niile, agbanyeghị na nkwukọrịta dị n'etiti otu nkwado na-akawanye mma, ọ nweghị ebe nchekwa maka ozi gbasara iwu vaping gburugburu ụwa.Ndepụta anyị sitere na nchịkọta nke isi mmalite: Global State of Tobacco Harm Mbepu akụkọ sitere na nzukọ mgbasa ozi Mbelata mbuso agha nke Britain Ihe Ọmụma-Action-Change, Mgbasa Ozi maka weebụsaịtị ụtaba na-achịkwa ụtaba na ụtaba na-achịkwa ụtaba, nke Johns mepụtara. Ndị nyocha Hopkins University. Ọnọdụ ụfọdụ countries kpebiri site na nyocha mbụ.
Offọdụ n'ime mba ndị a amachibidola iwu ojiji na ire ere, ọtụtụ na-amachibido ire ahịa, ụfọdụ na-amachibido naanị ngwaahịa nicotine ma ọ bụ nicotine nwere. N’ọtụtụ mba, a naghị eleghara iwu anya. Na ndị ọzọ, a na-amanye ha. Ọzọkwa, lelee ebe a pụrụ ịdabere na ya tupu ị gaa mba ọ bụla nwere ngwongwo na e-mmiri. Ọ bụrụ na edeghị mba, a na-anabata ma na-achịkwa vaping, ma ọ bụ na enweghị iwu ọ bụla na-achịkwa sịga sịga (dịka ọ dị ugbu a).
Anyị na-anabata ozi ọhụrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị maara iwu agbanweela, ma ọ bụ iwu ọhụụ na-emetụta ndepụta anyị, biko kwuo okwu anyị ga-emelite ndepụta ahụ.
Iwu iji, iwu akwadoghị ire
Iwu akwadoghị ire, belụsọ ngwaahịa ọgwụ akwadoro
Iwu iji, iwu akwadoghị ibubata ma ọ bụ ree. Na Febụwarị 2020, onye isi ala Mexico nyere iwu machibidoro ịbubata ngwaahịa niile, gụnyere ngwaahịa efu-nicotine. Otú ọ dị, a ka nwere obodo na-eto eto na mba ahụ, na ndị isi na-akwado ndị otu Pro-Vapeo Mexico. Amabeghị ma gọọmentị ga-anwa iweghara ngwaahịa ndị ọbịa webatara na mba ahụ
Ekwenyere na iwu akwadoghị iji, na-ere ere nicotine n'uzo na ezighi ezi
Iwu iji, iwu ịre-mana ire ngwaahịa nke ngwaahịa emepụtara ka Aug.8, 2016 machibidoro na-enweghị usoro ire ahịa n'aka FDA. Onwebeghị ụlọ ọrụ na-agbapụta akwụkwọ etinyela maka usoro azụmaahịa. Na Septemba 9, 2020, ngwaahịa pre-2016 na-enyefebeghị maka nkwenye ahịa ga-abụkwa iwu na-akwadoghị ịre
Iwu iji, kwenyere na ire ere adịghị, ma e wezụga ngwaahịa ọgwụ akwadoro
Kweere iji iwu iji, iwu akwadoghị ire-mana ọnọdụ edoghị anya
Kwere iwu na-akwadoghị iji, iwu na-ere ere
Iwu iji, kwenyere na iwu akwadoghị ire
Iwu iji, iwu na-akwadoghị ire-agbanyeghị, mba ahụ kwupụtara na 2019 ebumnuche ya ịhazi na ịhazi sịga sịga
Bangladesh ugbu a enweghị iwu ma ọ bụ ụkpụrụ a kapịrị ọnụ maka vaping. Agbanyeghị, na Disemba 2019 otu onye ọrụ gọọmentị na-ahụ maka ahụike gwara Reuters na gọọmentị “na-arụsi ọrụ ike ịmachibido mmepụta, mbubata na ire e-sịga na vaping niile tobaccos iji gbochie nsogbu ahụike.”
Iwu iji, iwu akwadoghị ịre ọtụtụ ngwaahịa
A machibidoro iwu: iwu akwadoghị iji, machibidoro ire ere
Ekwenyere na amachibidoro ya
Na Septemba 2019, gọọmentị etiti India machibidoro ire ere ngwaahịa vapu kpam kpam. Gọọmentị, nke ọma maara na 100 nde ndị India na-ese anwụrụ ọkụ na ụtaba na-egbu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nde mmadụ kwa afọ, emeghị ihe ọ bụla iji belata siga. Ọ dabara na, gọọmentị India nwere pasent 30 nke nnukwu ụlọ ọrụ ụtaba na mba ahụ
Iwu iji, iwu iji ree ngwaọrụ, iwu na-ere ire mmiri nwere nicotine (n'agbanyeghị na ndị mmadụ nwere ike ibubata ngwaahịa nwere nicotine nwere mmachi ụfọdụ). Ihe ndị na-emepụta sịga na-ekpo ọkụ (HTPS) dị ka IQOS bụ iwu
A machibidoro iwu
Iwu iji, iwu akwadoghị ire ngwaahịa ndị nwere nicotine. Agbanyeghi na ahia ahia nke ngwaahịa nke nicotine nwere ihe megidere iwu, Malaysia nwere ahia vapu na-eme nke oma. Mgbe ụfọdụ ndị ọchịchị na-awakpo ndị na-ere ahịa ma napụ ngwaahịa ha. A machibidoro ire ire ngwaahịa niile adịghị ọcha (ọbụlagodi na enweghị nicotine) na steeti Johor, Kedah, Kelantan, Penang na Terengganu
Ekwenyere na a ga-amachibido ya, dabere na isiokwu August 2020
Iwu iji (machibido iwu n'ihu ọha), iwu akwadoghị ire
A machibidoro iwu: iwu akwadoghị iji, machibidoro ire ere. N'ime afọ gara aga, ihe onwunwe bụkwa mpụ, na-ata ntaramahụhụ ruru $ 1,500 (US)
Kwere iwu iji, iwu na-ere ere. Thailand enwetawo aha maka ịmanye mmachibido iwu ya na mbubata na ire ngwaahịa ngwaahịa nwere nnukwu ihe omume dị elu na afọ ndị na-adịbeghị anya, gụnyere ijide ndị njem nleta na-agbapụta "mbubata." A na-akọ gọọmentị na-atụgharịkwa echiche banyere iwu sịga sịga gbasara ike
Kwere iwu iji, iwu na-ere ere
Iwu iji, iwu akwadoghị ibubata ma ọ bụ ree. Re na ibubata ngwa ahịa vap bụ iwu na Turkey, ma mgbe mba ahụ gosipụtara mmachibido iwu ya na 2017, ndị WHO wepụtara nkwupụta mgbasa ozi na-ekele mkpebi ahụ. Ma iwu ndị ahụ na-emegiderịta onwe ha, na e nwere vaping market na a vaping obodo na Turkey
Iwu iji, na-akwadoghị ire nicotine. N'Australia, inweta ma ọ bụ ire nicotine bụ ihe megidere iwu na-enweghị ndenye ọgwụ dọkịta, mana belụsọ n'otu steeti (Western Australia) ngwa iwu chọrọ ka ere. N'ihi nke a, ahịa ahịa na-aga nke ọma n'agbanyeghị iwu. Ahụhụ maka ihe onwunwe dị iche site n'otu steeti gaa na nke ọzọ, mana ọ nwere ike ịka njọ
Iwu iji, iwu na-akwadoghị ire-agbanyeghị na mba ahụ yiri ka ọ na -achị ịba mba ngwaahịa
Kpachara anya ma mee nyocha!
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-eleta obodo ị na-amaghị nke ọma, biko jụọ ndị isi obodo ahụ gbasara iwu na ihe ndị nwe obodo ga-anabata. Ọ bụrụ na ị na-aga otu n'ime mba ebe iwu vapapes bụ iwu na-akwadoghị - ọkachasị mba ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ --wa - chee echiche ugboro abụọ banyere otu ị ga-esi kpebisie ike, n'ihi na ị nwere ike ibute nsonaazụ siri ike. Imirikiti ụwa na-anabata vapu n'oge a, mana ụfọdụ atụmatụ na nyocha nwere ike igbochi njem gị dị ụtọ ka ọ ghara ịghọ ihe nro.
Trade mbu nke Global “VIP Pass” ...
Anyi nwere “Nzuzo di oke uto ...
FEELM na-enwu na Kasị Ukwuu Worldwa ...
AJOTA ỌZỌ na Hong Kong Stock Exchange
Nzuzo Nzuzo nke FEELM Atomization Techn ...
Steven Yang: Otu Nzọụkwụ maka M, Otu Nnukwu L ...
Asatọ iji luso ọgụ COVID-19, FEELM bụ R ...
FEELM meriri iF Design Award 2020 ihe ohuru ...
E Sịga ọnya Pack, E Liquid Alụlụụ Sịga, Okingụ Sịga Ọzọ, Newport E sịga, Kpoo Sịga, Epen,